Nodimandry ny 3 novambra teo - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Nodimandry ny 3 novambra teo
Nantsoin'ny Ray handray ny valin-kasasarany eo anilany ny sabotsy 03 novambra 2018 i Mgr Roger Victor Rakotondrajao, evekan'ny Diosezin'i Mahajanga.
Teraka ny 26 mars 1960 i Mgr Roger Victor Rakotondrajao. Nohamasinina ho pretra tao amin'ny Diosezy Miarinarivo ny 29 jolay 1990. Nandalina momba ny lalanan'ny Fiangonana tao Parisy Frantsa, ary teo am-pamitana izany fianarana izany no notendren'i Papa Benoa faha-16 ho Eveka (coadjuteur) tao amin'ny diosezy Mahajanga ny 18 avril 2008.
Nohamasinina ho Eveka tao Mahajanga ny 6 jolay 2008. Rehefa neken'i Papa Benoa faha-16 ny fangatahan'i Mgr Joseph Ignace Randrianasolo tsy hanohy ny asa maha-evekan'i Mahajanga azy noho ny fahasalamana dia notendren'i Papa Benoa faha-16 ho Eveka tompon-toerana tao Mahajanga i Mgr Roger Victor Rakotondrajao. Napetraka tamin'ny fiketrahana maha Evekan'i Mahajanga azy araka ny fomban'ny Fiangonana ny alahady 11 avril 2010, ary nitondra io diosezy io hatramin'ny 3 novambra 2018, fotoana niantsoan’ny Ray azy hiala sasatra eo anilany. "Ampy ho anao ny Fahasoavako" 2 Kor 12,9 no teny faneva nentiny niaina ny fiainana maha Eveka azy. Niarahana nahita ny asabe nataony tamin’ny fandraisana ny JMJ Mada faha10 farany teo.
Niarahan’i Vahoaka Malagasy rehetra, sy ny any ivelany ihany koa, nandre ny hafany miantefa amin’ny kandida sy isika mpifidy. Samia mahay mandray izany hafatra izany.
Be ny vitany ho an’ny diosezin’i Mahajanga. Handry am-piadanana anie ny fanahiny.
Ny ekipan’ny www.lakroa.mg dia mamangy amin’ny fahoriana ny diosezin’ny Mahajanga izay manontolo sy ny fianakavian’i Mgr. Ary mankahery antsika fa lasa nanatona ny ray izy. Tombon-dalana ny azy. Ny fanohizana ny fampianarana sy fanatanterahana ny hafany no handraasany amintsika.